Yaa maalgelinayo socdaalka RW Kheyre ee Galmudug (Xog)? | Maanta Online
Home / Faallo / Yaa maalgelinayo socdaalka RW Kheyre ee Galmudug (Xog)?
Yaa maalgelinayo socdaalka RW Kheyre ee Galmudug (Xog)?
Posted by: admin in Faallo, Wararka July 7, 2019	0 44 Views
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo ku sugan Magaalada Dhuusamareeb ayaa lagu waddaa in Maanta ah uu gaaro Magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug.
Wasiirka Arrimaha dibadda ayaa Warbaahinta u xaqiijiyay in Ra’iisul Wasaaruhu uu tagi doono Magaalada Gaalkacyo, islamarkaana uu bulshadda halkaasi kunool kala hadli doono sidii loo dhameyn lahaa Khilaafka maamulka Galmudug.
Kheyre ayaa la kulmi doono Odayaasha dhaqanka Magaalada Gaalkacyo, islamarkaana u sharaxi doona Wajiga cusub ee Galmudug, maadaama dowladda Soomaaliya ay la wareegtay dib u heshiisiinta iyo doorashadda Galmudug.
Ra’isulwasaaraha ayaa la filayaa inuu Odayaasha Beesha Sacadka uu u qeybiyo lacago taasoo MOL ay xog ku he shay in shirkado Shidaal ay bixinayaan lacagaha lagu laaluushay oday dhaqameedka beelaha dega Galmudug si RW Kheyre & shirkadaha shidaalka ay u bilaabaan soo saaridda saliidda ku jirta agagaarka xeebaha Hobyo.
Sida la wada ogsoon yahay, waxaa SOMA-OIL la siiyay ceelasha saliidda ee ku wajahan Galmudug waana midda keentay safarka RW Kheyre ee Galmudug taasoo uu ku bixinaayo qarash aad u tiro badan.
MOL waxay idiin soo gudbineysa dhammaan lacagaha ay bixiyeen shirakadaha shidaalka iyo sida loo kala qaatay.
Xog kale oo aan ka helnay magaalada Gaalkacyo aya sheegeysa in Odayaasha Gaalkacyo ay diideen inay hubka wareejiyaan isla markaasna ay taas keentay inuu Ra’isulwasaaraha Maanta safar ku aado halkaas. RW Kheyre aya ka shaqeynaya in uu gacantiisa soo galo hubka yaal Galmudug si aanu berri dhibaato ugu noqon marka ay shirakadaha shidaalka bilaabaan in ay soo degaan xeebaha Galmudug.
Ra’isulwasaaraha ayaa doonayo inuu odayaasha kasoo dhaadhcsiiyo inay hubka wareejiyaan isla markaasna ay ciidamadaas la wareegto dowladda laguna daro liiska Ciidamada Dowladda ee mushaarka ka qaato Dowladda, isagoo u balan qaadi doona in uu siinayo lacago sidii hore uu ugu sameeyay Dhuusamareeb & Guriceel.
Ra’isulwasaaraha ayaa horey hubka uga soo wareejiyey Ciidamadii Ahlu Sunna ee ku sugnaa Dhuusamareeb iyo Guriceel, sidoo kale wuxuu kasoo wareejiyey ciidamadii ku sugnaa Xiraale iyo Ballanbale.
Previous: Xisbiga Sinnaanta Midnimada Nabadda Soomaaliya Oo Guul Ka Soo Hooyay Kormeerka Guddiga Doorashooyinka
Next: Wakiilka cusub ee Soomaaliya u qaabilsan QM oo safarkiisii ugu horreeyey ku tagay Puntland